HGH Thailand - mụtakwuo banyere Hormone Growth Human na Bangkok - HGH Thailand | Ụlọ ahịa ọgwụ Bangkok | USA
HGH Thailand - mụtakwuo banyere Hormone mmadụ na Bangkok
Uto Hormone mmadụ (Hormone na-eto eto, GH, HGH, Somatotropin, somatropin) - hormone peptide nke pituitary ahụ, nke a na-eji mee egwuregwu Maka ịmepụta ahụ ike. Mmiri hormone ma ọ bụ somatotropin (sitere na Latin soma - ahu) nwetara aha ya maka ndị na-eto eto, ọ na-eme ka ọganihu dị ịrịba ama na ntinye (ogologo). Ọ bụ n'ihi na ọganihu nke ọkpụkpụ ọkpụkpụ dị elu na-eto eto.
- Na-ebelata abụba abụba
Mgbanwe ndị metụtara afọ dị na nzuzo nke HGH
Ihe nzuzo nke uto uto na-agbadata mgbe ọ na-eto. Ọ dị ntakịrị na ndị agadi, ndị belatara dịka ihe ndabere, yana ugboro ugboro na njupụta nke ọnụ ọgụgụ nzuzo. Otito nke uto uto nke uto di oke na nwata, ogo oke nke kachasi ike n’oge onwa n’iru n’enweghi ike nke oma karia n’oge ogba eto. Usoro ịgba egwu circadian na nzuzo nke HGH:
HGH na-ewu aru na Thailand
Ọnụ ahịa dị ukwuu nke ọgwụ ọjọọ bụ ihe dịka puku 4-5 puku dollar kwa otu.
Mgbochi nke ọrụ nke thyroid gland - bụ nke onye anaghị egosipụta onwe ya, n'ihi na mmegbu dị oke ala. Maka mkpochapu ya ma nwekwuo arụmọrụ nke okirikiri a na-eji Thyroxine mee ihe na 25 mcg kwa ụbọchị. Mgbe ịkwụsị hormone nke na-eto eto, a na-eweghachi ọrụ thyroid.
HGH na peptides n’ịrụ ahụ
Top 3 HGH a ma ama na Thailand
Gbanyere na: Genotropin Thailand, HGH Bangkok, HGH Thailand
Previous isiokwu HGH Maka ụmụ nwanyị - Ọgwụ mgbochi Aging na Thailand
isiokwu na-esonụ Ogwu HGH nke onwe onye site na Xotumin 36IU